Posted by ကလိုစေးထူး at 7:27 PM
May 15, 2008, 8:11:00 PM
စာမတတ်ဘူးလေ. စာလုံးပေါင်း မှားလို့ ပြန်ပြင်တာ
အားလုံးမြင်တယ် သူတို့ မမြင်ဘူး
အားလုံး ကြားတယ် သူတို့ မကြားဘူး
သူတို့က လူတွေမှ မဟုတ်ကြတာ..
May 15, 2008, 8:13:00 PM
လိုနေတာ ကို သူတို့ မသိတာခက်တယ် စစ်သားဆိုမှတော့ စစ်တိုက်ဖို့ လောက်ပဲတက်မှာပေါ့ လူမှုရေးဘယ်နားလည်မှာလဲ UN အဖွဲ့ တွေ ပြန်မထွက်မှာကိုပဲ ကြောက်နေသေးတယ် နိုင်ငံခြားသား အများဆုံးဝင်လာရင် အယောက် ၁၀၀၀ ပေါ့ သူတို့ စစ်အင်အား ၄ သိန်းကျော်က ဒီလောက် လူလေးကိုကြောက်စရာလား မဟုတ်တာလုပ်ထားတဲ့ ခလေးလို့ ပေါ့ မျက်စိပျက်မျက်နှာပျက်ကြောက်ကလည်းကြောက် ရိုက်ခံထိမှာဆိုးလို့ငြင်းလည်း ငြင်းသေးဆိုသလိုဖြစ်နေတယ် ........။ တပ်မတော် အင်အားရှိမှ တိုင်းပြည် အင်းအားရှိမယ် ဆိုတဲ့ သီချင်းမှားနေတယ် တပ်မတော် အင်အားရှိမှ တိုင်းပြည် အမျိုးပြုတ်မယ် ဖြစ်ရမှာ................။ လူမဟုတ်တာတွေကို ပြောရတာကလည်း အရာမေ၇ာက်ပါဘူး လေကုန်တယ် လက်ညောင်းတယ် ။ တကယ်ဆိုရင်တော့ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သူက ကိုယ့်ပြည်သူအပေါ်တော့ စေတနားလေး ထားသင့်ပါတယ် ဒါလေးပဲ လိုနေတာ ပါ အခုတော့း((((
May 15, 2008, 9:16:00 PM
Junta has not any goodwill to civilian.They already destroyed many people`s life, hope ,dignity, honest, loyal.......in this Cyclone Nargis.
Obvious this cyclone Nargis later they could not hide what they have done to Myanmar people..
May 16, 2008, 12:44:00 AM
မျှတမှု ရှိပါတယ်အစ်ကို...။ လက်ခံပါတယ်...။
May 17, 2008, 6:06:00 AM
အမျိုး များအ ရေးတာဝန်
အမျိုးသားအရေး တာဝန် ..
...ခွဲခြားနားလည်စွမ်းတဲ့အမြော်အမြင်ရှိသော သူများ အုပ်ချုပ်မှပဲ...ဖြစ်နိုင်ပေမည်..
May 18, 2008, 12:23:00 AM
သူများကူညီတာလဲလက်မခံ၊ ကိုယ်ကိုတိုင်လဲမလုပ်၊ မနေနိုင်တဲ့ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်းကူညီမယ်ဆိုတော့လည်းအဝင်မခံ၊ အကုသိုလ်တွေတခုပြီးတခုထပ်လိုချင်ပုံရတယ်နော်။
May 18, 2008, 5:21:00 AM
ငါ ငါ့မိန်းမ ငါ့သားသမီး ငါ့ဆွေမျိုး ဘာမ မဖြစ်ပြီးတါ ဘဲ စိုတာကိုသက်သေပြလိုက်တာပါဘဲ..,
May 18, 2008, 2:26:00 PM
May 18, 2008, 8:47:00 PM